“အချင်းချင်း ဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတာ ကုမ္ပဏီအားလုံး လေ့လာထားရပါမယ်” အေအိုင်အေ ဥက္ကဋ္ဌ | Frontier Myanmar
“အချင်းချင်း ဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတာ ကုမ္ပဏီအားလုံး လေ့လာထားရပါမယ်” အေအိုင်အေ ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာအစိုးရက အာမခံလုပ်ငန်းဈေးကွက်ကို ဖြေလျှော့မှုတွေပေးဖို့နဲ့ ပြည်ပက လုပ်ငန်းရှင်တွေကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ ပေးမလား၊ နိုင်ငံခြားသား အပြည့်အဝ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲအနေနဲ့ ခွင့်ပြုမလားဆိုတာကိုတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား မသိရသေးပါဘူး။ အာမခံဈေးကွက် အခြေအနေ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆောင်ရွက်မယ့် သူ့ကုမ္ပဏီရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ ပြည်တွင်းကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ရှိတယ်လို့ ယူဆထားတာတွေကို အေအိုင်အေ ဂရု(ပ်) AIA Group ရဲ့အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်နဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ မစ္စတာ အင်းဂ် ကင်န်ဟွေ Mr Ng Keng Hooi နဲ့ Frontier မှ ကျော်ရဲလင်းတို့ရဲ့မေးမြန်းဆွေးနွေးချက်ကို တင်ပြထားပါတယ်။
အေအိုင်အေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ ဘာကြောင့်စဉ်းစားရတာလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံက လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ။ ဈေးကွက်ဖြေလျှော့မှုနဲ့အတူ ဈေးကွက်ကြီးထွားမှုနဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအရ အလားအလာက ကြီးမားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေအရ လူတွေပိုမိုချမ်းသာလာမယ်၊ ဝင်ငွေပိုများလာမယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့အတွက် အသက်အာမခံထားဖို့ အလားအလာကောင်း ရှိလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းက အသက်အာမခံလုပ်ငန်း ဖြစ်နေတော့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အတူ လိုက်ပါနိုင်ဖို့ ဈေးကွက်ထဲကို ကျွန်တော်တို့ စောစော ဝင်ချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအရ ကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
တနိုင်ငံလုံးကို ခြုံကြည့်ရင် အစစအရာရာ လမ်းပွင့်နေပြီး နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိုအပ်နေပါတယ်။ အေအိုင်အေက အာရှဒေသက နိုင်ငံပေါင်း ၁၇ နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်မှု အများကြီးရနေတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ယူဆောင်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဈေးကွက်အတွက် ကောင်းသွားပြီး ဈေးကွက်ကလည်း ကောင်းကျိုးတွေ ရရှိအောင် လမ်းဖွင့်ပေးသွားမယ်လို့ ယူဆထားပါတယ်။ အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က အလုပ်အကိုင်တွေ ဖန်တီးပြီး ရေရှည်မှာ နိုင်ငံအတွက် အများကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမှာပါ။
ဥပမာအနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့က ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေ အများဆုံး ဝယ်ယူထားတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာ ထိုင်းဘွန်းစာချုပ်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၅၀ ကျော်ကို ကိုင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဈေးကွက်ထဲမှာ ရေရှည်အရင်းအနှီး ဖြည့်ဆည်းပေးသူတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းကျိုးပြုမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဈေးကွက်ကြီးထွားစေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ ဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်အကိုင်တွေ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့လို ကုမ္ပဏီတစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဝင်လာတာကို အစိုးရက အပြုသဘောဘက်က မြင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အေအိုင်အေ ဂရု(ပ်) အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်နဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ မစ္စတာ အင်းဂ် ကင်န်ဟွေ။ ဓာတ်ပုံ – ပံ့ပိုး
ခုချိန်အထိ နိုင်ငံခြား အာမခံလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် မပေးသေးပါဘူး။ ပြည်တွင်းအာမခံ လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ယူဆပါသလဲ။
လောလောဆယ်မှာတော့ သေးငယ်နေသေးပေမဲ့ ကြီးထွားလာမယ့် အလားအလာတွေ ရရှိထားပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေက ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ဝင်လာဖို့ လိုအပ်တာလည်း ဒါကြောင့်ပါပဲ။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကို လမ်းဖွင့်ပေးထားမယ်ဆိုရင် ဈေးကွက်လျင်လျင်မြန်မြန်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးလာစေမယ့် ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို သယ်ယူလာကြပါလိမ့်မယ်။
သူတို့က ဒီဘဏ္ဍာနှစ်အကုန်လောက်မှာ အာမခံဈေးကွက် ဖြေလျှော့မှုကို အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သတင်းကြားထားပါတယ်။ အစိုးရက ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လအကုန်လောက်မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။
ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကို ရာနှုန်းပြည့် ကုမ္ပဏီခွဲ ဖွင့်ခွင့်ပေးမလား၊ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဖက်စပ်ဖွင့်ခွင့်ပေးမလားဆိုတာ ပြတ်ပြတ်သားသား မသိရသေးပါဘူး။ ဖက်စပ်ဖွင့်ဖို့ လိုမယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ။
ကျွန်တော်တို့ အေအိုင်အေလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကို ကောင်းကောင်းလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို ဈေးကွက်ထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ ဒီအချက်ကလည်း အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ အာမခံလုပ်ငန်းက သိပ်ကို ရေရှည်ကျတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းအနှီး အများကြီး ထည့်ရတယ်။ ငွေပြန်ဖော်နိုင်ဖို့ အချိန်အများကြီး ယူရတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ကုမ္ပဏီမျိုးက ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကြီးထွားဖို့နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကောင်းကောင်းလည်ပတ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းဆောင်ရည် ရှိပါတယ်။
ဖက်စပ်လုပ်ငန်းက အတော်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း အလားတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မယ့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းမိတ်ဖက် ရှာတွေ့ဖို့ မသေချာပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီဈေးကွက်ထဲကို ဝင်ချင်တယ်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး လုပ်ငန်းကြီးထွားချင်တယ်ဆိုရင် ငွေအများကြီး လိုပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအတွက်နဲ့ ဈေးကွက်အတွက် ကောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ထင်တာကို ကျွန်တော်တို့ ပိုပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့က ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ရတာကို ပိုသဘောကျတာပါ။
မူဝါဒရေးဆွဲသူတွေနဲ့ တချို့ဒီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ သြဇာတိက္ကမရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းတုန်းက သူတို့က ဖက်စပ်ပဲပေးနိုင်မယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် အေအိုင်အေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း လုပ်နိုင်တဲ့အချိန် ရောက်တဲ့အထိ စောင့်ရတော့မှာပေါ့။.
မြန်မာနိုင်ငံက ဘာကြောင့် ခိုင်မာတဲ့ အာမခံဈေးကွက် လိုအပ်တာလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပိုမိုကြွယ်ဝချမ်းသာလာပြီး ဝင်ငွေတွေ ပိုရလာတဲ့အတွက် အသက်အာမခံကလည်း အရေးပါလာတာကြောင့် ဒါက သိပ်အရေးကြီးတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အာမခံက မိသားစုတွေကို အကာအကွယ် ကောင်းကောင်းပေးပါတယ်။ ဒီအချက်က အရေးအကြီးဆုံးအချက်ပါပဲ။
ခင်ဗျား တစ်နှစ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဝင်ငွေရတယ် ဆိုပါစို့။ ခင်ဗျားဝင်ငွေရဲ့ အနည်းဆုံးဆယ်ဆကို အကာအကွယ်အဖြစ် လိုအပ်ပါမယ်။ တကယ်လို့ အဓိက ငွေရှာပေးနေတဲ့သူ ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင် မိသားစုကို ထောက်ပံ့ဖို့ သူတို့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေရဲ့အနည်းဆုံး ၁၀ ဆလောက် သူတို့မှာ ရှိသွားပြီ။ အဲဒီငွေက မိသားစုအနေအထားကို ထိန်းထားနိုင်ဖို့ အချိန်ရသွားစေပါတယ်။
အာရှနိုင်ငံ အများစုမှာ လူတစ်ယောက်ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ လူမှုဖူလုံရေး အာမခံစနစ် မရှိပါဘူး။
လူမှုဖူလုံရေး အာမခံစနစ် မရှိတာက အာမခံလုပ်ငန်းတွေကို အခွင့်အရေး ပိုပေးသလား။
ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အာမခံလိုအပ်တာပါ။ လူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ လူမှုဖူလုံရေးစနစ်ကို မှီခို အားထားနေလို့ မရပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ အာမခံလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို တကယ်တမ်း လွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်ဘူးလို့ တချို့က ဝေဖန်ကြပါတယ်။ ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် လွတ်လပ်တဲ့ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ဘယ်လောက်အရေးပါပါသလဲ။
နေရာတိုင်းမှာတော့ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကို လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေနဲ့ လွတ်ကင်းသူတွေ ဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူတို့ဘယ်လိုရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောနိုင်လောက်အောင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ အနေအထား မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တချို့ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းသူတွေက ပြည်တွင်းက မိတ်ဆွေတွေကို အကာအကွယ် ပေးချင်ပုံ ရပါတယ်။
တကယ်တော့ အချင်းချင်း ဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတာကို ကုမ္ပဏီအားလုံးက လေ့လာထားရပါမယ်။ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေမှာ အားသာချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဈေးကွက်ကို သူတို့သိတယ်။ လူတွေအကြောင်း သူတို့သိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဝင်လာရင် ကျွန်တော်တို့မှာ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ရှိနေပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း ပြိုင်ရဦးမှာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့လို ကုမ္ပဏီမျိုးတွေ ဝင်လာတာ ဈေးကွက်အတွက် ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
အိမ်ယာတစ်သန်းစီမံကိန်းအတွက် အာမခံအစီအစဉ်များကို မြန်မာ့အာမခံနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ သဘောတူ
ကျော်ရဲလင်း အစိုးရက တည်ဆောက်မည့် အိမ်ယာစီမံကိန်းများအတွက် အိမ်ယာဝယ်ယူရေး ချေးငွေအာမခံ အစီအစဉ်များကို မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းက နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။ လာမည့် နှစ် ၃၀ အတွင်း တန်ဖိုးနည်းနှင့် တန်ဖိုးသင့်အိမ်ယာ အခန်းပေါင်း တစ်သန်းကို တည်ဆောက်သွားမည်ဟု ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုအိမ်ယာများအတွက်.
ကျွဲနွားများကို အာမခံပစ္စည်းအဖြစ် လက်ခံအသုံးပြုသော Sentinel Chain နည်းပညာ အသုံးပြုမည့် စမ်းသပ်စီမံကိန်း လုပ်ဆောင်မည်
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ အံ့အားသင့်ဖွယ် နှုတ်ထွက်